Ukhuza ibuya uzime wodumo | News24
Ukhuza ibuya uzime wodumo
UMampintsha ozofika azonandisa kulo mncintiswano.ISITHOMBE: internet
UKHUZA ibuya uzime wodumo owaziwa ngokuthi u-Miss Summer Mgungundlovu njengoba uzobanjelwa eKhawula’s Lounge eSweetwaters ngoMgqibelo mhla lulunye kuZibandlela (December).
Lo nobuhle uhlelwe yiNtabayabantu Models kanti uzobe ungaqali ukwenzeka kulo nyaka njengoba wake wenzeka ngaphambili.
Ukungenela kwalabo abafuna ukumodela u-R100 umuntu ngamunye.
Ngokusho kukaMnuz Mbuso Nyandu weNtabayabantu Models uthe lena ngenye yezindlela zokuzama ukugcina intsha imatasa ngento elungile ingaze igcine isizinikele ezintweni ezingalungile, njengokuphuza utshwala kanye nokusebenzisa izidakamizwa.
“Ngaphandle kwalokho sifuna ukusiza futhi ukuthi bakwazi ukuzethemba siphinde sikwazi ukubanikeza ithuba lokuthi babonakalise ithalente labo baphinde bakwazi ukufunda izinto ezahlukene ngezokumodela ukuze uma sebephumela ngaphandle sebeyongenela imncintiswano emikhulu babe sebenakho ukuzethemba futhi sebazi ukuthi yini efunekayo. Siyakholelwa kakhulu ekuthuthukiseni intsha yakithi ngoba siyazi ukuthi kunentsha ezogcina iphila ngazo ezonobuhle,” kubeka yena.
Lo mcimbi awuzugcina nje ngokuba owonobuhle kodwa kuzoba khona i-afterparty ntambama kusukela ngehora lesikhombisa ntambama nalapho kuzofika khona isihlabani somculo uMampintsha ukuzonandisa.
Ngemininingwane ngalo zime ungashayela uMnu Nyandu enombolweni ethi: 079 616 0059. Mayelana ne-afterparty ungashayela uDJ Cool ku-061 008 2056 okanye 067 179 5534.
INtabayabantu ihlele omunye uzime wayo waminyaka yonke obizwa ngokuthi u-Miss KZN Traditional nozobanjwa mhla ziyi-8 kuZibandlela (December) eBessie Head Library. Ukungenela nakuwona lo mcintiswano uR100 umuntu ngamunye. Ithikjithi lokungena emnyango lizobiza u-R100 kanti i-VIP yona izoba u-R150.